Amavidiyo akuma-Landing Amakhasi akhulisa ukuguqulwa ngo-130%
Sekuvele kunezibalo ezithile eziphoqayo lezo vidiyo kwandisa amazinga wokuguqulwa kuma-imeyili ngo-200% kuya ku-300%. Ividiyo isiqala ukudlala indima enkulu kuzo zonke iziteshi zokumaketha. Imavex yinkampani yokuthuthukisa iweb ebizwa ngegama le- izinkampani zokukhangisa eziphezulu zezinjini zokusesha ezweni.
Bengikhuluma noRyan Mull futhi ubalule ukuthi babone ukuthuthuka okuphawulekayo kumazinga wokuguqulwa kwamakhasimende abo akhokha ngokuchofoza ngakunye lapho befaka amavidiyo asezingeni eliphakeme ekhasini lokufika.
Izindaba ezimnandi ukuthi, idatha icace bha, futhi idathasethi inkulu ngokwanele ukukhombisa imiphumela yangempela. Ngokwengeza ividiyo ekhasini lokufika le-SEM / PPC, iklayenti libone ukukhuphuka okungu-130.5% kokuhola okukhiqizwe kulo mkhankaso. ngoRyan Mull, Imavex
U-Imavex ukhiphe ipulatifomu yokubamba ividiyo, I-Streamotor, ukuthi basebenzisa ukusingathwa nokuphakelwa kwamavidiyo asezingeni eliphakeme.
Izindleko zamavidiyo axubeke kahle asuselwa kuwebhu zingahluka ngentengo. Kunezinsizakusebenza ezimbalwa zevidiyo ezingenza amavidiyo angaphansi kwe- $ 1,000 lilinye. Amavidiyo amaningi asebenzayo angabiza u- $ 2,500 nangaphezulu - kepha uma ukhulisa ukuguqulwa ngo-130%, akuthathi okuningi ukuthola imbuyiselo enhle kutshalo-mali!
Tags: amazinga wokuguqulwakhulisa ukuguqulwaikhasi lokufikaamakhasi okufikaAmavidiyo Wokumakethaamazinga wokuguqulwa kwamavidiyo
I-WordPress 3.0 - Angikwazi Ukulinda!
UJun 14, 2010 ngo-9: 01 AM
Kuyadabukisa, kepha kuyiqiniso kulokho engikubonile.
Ngisho nosayizi, ukubukeka kwesilinganiselo, nokubekwa esizeni kwenza umehluko… kuyaphutha, ngakho ngiyatshelwa
Jun 14, 2010 ku-1: 12 PM
Ungabelana nabanye 'bezinsiza zevidiyo zasendaweni' ozishoyo? Ngifuna ukwenza ividiyo eningi engabatholi abathengisi abafanele.
Jun 14, 2010 ku-2: 10 PM
Hewu! Ngubani okhiqize le vidiyo? Ngingathanda ukuhlangana nabo. Ingabe othile angangethula?
UJun 15, 2010 ngo-10: 49 AM
Lapha e-Indianapolis, izinsiza zevidiyo yi-Imavex (http://www.imavex.com), Ikhathalophu (http://www.cantaloupe.tv), Omunye Umklamo Opholile
I-Stars Media (http://12starsmedia.com) endaweni yangakini - bonke benza umsebenzi omuhle futhi bayahluka ngamanani nomkhiqizo.
I-Oct 20, i-2014 ku-2: i-50 PM
Ngisebenzela i-ejensi yevidiyo echazayo eseToronto ebizwa ngeLaunchSpark Video, futhi sithole ukuthi ividiyo ayisizanga nje kuphela ukukhulisa ukuthengiswa kwamakhasimende ethu, kodwa futhi isebenze njengethuluzi elihle lecebo labo lokuhola ngokujwayelekile. Amaklayenti ethu amaningi asebenzise amavidiyo awo okuchaza emibonisweni yezohwebo nakwizethulo futhi, futhi ngokunikeza izethameli ukubuka okuningiliziwe komkhiqizo / wenkonzo yabo, kuguqule labo babukeli baba abaholi. Ikhono lokusebenzisa kalula nangempumelelo ividiyo eziteshini eziningi kungenye into eyenza liyithuluzi elihle kakhulu lokukhangisa!
Okthoba 21, 2014 ngo-2: 04 AM
Amavidiyo amahle, Fabio!